Buy iphone & Samsung clone (0Ks) in Yangon on ipivi.com
iphone &amp; Samsung clone
Active on site: 91 days
Views: 519 (+ 1 )
2018 ထုတ် (USA)ကယ်ရီဖိုးနီးယား iphone clone များရောက်ပါပြီ*****
#ကယ်လီဖိုးနီးယားထုတ် iphone X Iphone 8plus
#ဗီယမ်နန်ထုတ် Samsung Note8 S9+ S8+
Memory 64GBအပြည့် Ram 4GBအပြည့် ဖြင့်အာမခံ ရောင်းချပေးနေပါပြီ Finger printအစစ်ဖြစ်ပါတယ်
#ကယ်လီဖိုးနီးယားထုတ်iphone ဆိုတာiphone offical ဖုန်းတွေနဲ့ လုံးဝ ချွတ်စွတ်တူပါတယ်.... ဆေးသား ကျွတ်ခြင်း ပျက်ခြင်းလုံးဝမရှ်ိပါဘူး အာမခံပါတယ်ခဗျာ......System ပိုင်းIOSပါ.... apk android အသုံးပြု့လို့ရပါတယ်..... ကုမ္မဏီတိုက်ရိုတ်ဈေးနှုန်းနဲ့ ရောင်းချပေးနေပါတယ်နော်..... ပစ္စည်းQuality နဲ့ဈေးနှုန်းလုံးဝမှန်ကန်ကြောင်း အာမခံပါတယ်.... အလုံးရေအကန်သက်ရှိပါတယ်.... ကြိုတင်မှာယူထားနော်.....ပစ္စည်းပျက်သွားမှမရလိုက်လို့ နောင်တတွေရနေမယ်နော် မိတ်ဆွေ. body တွေ အားလုံးက အလူမီနီယမ် သတ္တူ့နဲ့ ပြု့လုပ်ထားတဲ့ဖုန်းတွေမို့ ဒီဈေးနဲ့ လုံးဝတန်လို
ပစ္စည်းQuality နဲ့ ဈေးနှုန်းများကတော့အောက်မှာရေးပေးထားပါတယ်နော်...... ခုပဲ ဖုန်းဆက်မှာယူထားလိုက်နော်..... ဆိုင်နဲ့ တိုက်ရိုတ် ရောင်းတဲ့ပစ္စည်း ဖြစ်လို့ ယုံကြည်စွာဝယ်ယူနိုင်ကြောင်း သတင်းကောင်းပေးအပ်ပါတယ်နော်....နယ်မြို့များကမှာယူမယ်ဆို နယ်ကားဂိတ်ထိအရောက်ပို့ပေးပါတယ်နော်.....
အားလုံးမျှော်လင့်နေကြတဲ့ iphone 8plus Clone ထွက်ပါပြီဗျာအရည်အသွေးကလည်းကောင်းဈေးကလည်းသက်သာတော့ iphone ချစ်သူတို့အတွက်အားလုံးအဆင်ပြေပြီပေါ့ဗျာအာမခံကလဲ(၁)နှစ်ပါသေးတယ်နော်လက်ခမဲ့ Free နော်အရေအတွက်ကန့်သက်ထားတော့အမြန်ဆုံးပြေးဝယ်ထားမှစိတ်ချရမယ်နော်
1 .အစစ်အတိုင်းios ပုံစံပြသ၍andriodပုံစံဖြင့်သုံးရမှာဖြစ်ပါတယ်
2 .app များကို zapya ဖြင့်အလွယ်တကူကူးယူရနိုင်ပါတယ်
I phone model များ
I phone x .. . 150000
I phone 8 plus .. .. 140000
I phone7plus ... . 120000
I phne6plus .. . 100000
samsung model များ
Samsung S9plus .. . 160000
Samsung Note 8 ... . 150000
Samsung S8 plus .... 140000
Samsung j9plus . .. 110000
Samsung j 8 plus 100000
Oppo F5..85000
Vivo v7+ 85000
ပစ္စည်းများက 100% အသစ်​ Parcking များဖြင့်​​ကြောင်း အာမခံပါ သည်​ ...
ရန်​ကုန်​မြို့အတွင်းအိမ်​တိုင်​သာ​ရောက်​ပို့ ​ဆောင်​​ပေးပါ သည်​ နယ်​က Coustom များအတွက်​ ကားဂိတ်​က တဆင့်​ပို့​ဆောင်​​ပေးပါသည်​....
ပစ္စည်းအပို များဝယ်​ယူလို့ ရသဖြင့်​ ပျက်​သွားမာစိတ်​ပူစရာမလို​တော့ပါဘူး
ဆိုင်​ဖွင့်​ချိန်​ မနက်​ ၉ နာ ရီ မ ည ​နေ ၆ နာရီ အထိ. .
09950662648. . .📞📞
ကျ​နော်တို့Online Shop မှ​ရောင်း​သောiphone clone များမှာအစစ်​ကဲ့သို့တစ်​ပုံစံထဲထုတ်​လုပ်​ထားတာဖြစ်​ပါတယ်​။​ဘောဒီပိုင်းဆိုင်​ရာက်ိုလည်းသထ္တု သားဖြင့်​
များ၊Settingsပိုင်းဆိုင်​ရာများမှာလည်းအစစ်​ကဲ့သို့ ios ပုံစံပြသမှာဖြစ်​ပြီးအသုံးပြုရာမှာ​တော့Andriod ပုံစံဖြင့်​အသုံးပြုရမှာ
ဖြစ်​ပါတယ်​၊App များ၊Game များ၊Video များကို Zapya ဖြင့်​မည်​သည့်​ Andriod ဖုန်းနဲ့မဆိုအလွယ်​​တကူကူးယူနိုင်ပါတယ်​။ကျ​နော်​တို့Online Shop မှ​ရောင်းချ​သော iphone clone များရဲ့အဓိကအားသာချက်​မှာအပိုပစ္စည်းအလွယ်​တကူဝယ်​ယူရရှိခြင်း၊iphone အစစ်​၏အားသွင်းကြိုး၊မကွဲမှန်​၊နားကြပ်​၊ကာဗာ၊စသည့်​ပစ္စည်းများအားလုံးနှင့်​တွဲသုံး၍ရပါသည်​​၊ဆားဗစ်​က​
​တော့လက်​ခမဲ့ 1 years Freeဖြစ်​ပါတယ်​။
ရန်​ကုန်​မြို့ / မန္တလေးမြို့ /တို့မှမှာယူ​သောမိတ်​​ဆွေမျာအားအိမ်​အ​ရောက်​ပို့​ဆောင်​​ပေးမှာဖြစ်​ပြီးအိမ်​​ရောက်​မှ​ငွေရှင်းရမှာဖြစ်​ပါတယ်
Name: iphone &amp; Samsung clone
Active on site 91 days